Factorylọ ọrụ nchekwa ihu na ndị na-eweta ihu | New Asia Pacific
Aram Ngwa ahịa】
Aha: Ihu ihu
Ihe: Nnukwu uzo nwere puru iche mgbochi PET
Colorway: acha anụnụ anụnụ, Red, oroma, wdg
Ogo: 32x22cm, 33x22cm ma ọ bụ 35x24cm
Okpomoku: 0.24mm ma obu 0.4mm.
Mmetụta nchebe: Ejiri ya maka imepụta kwa ụbọchị, uzuzu uzuzu, mmanụ na-esi na kichin, mgbochi mmiri, mgbochi mmiri, mgbochi mmiri, ọkọnọ na-abụghị ọgwụ.
Hara Njirimara Ngwa】
5. Ejiri ihe nkiri abụọ kpuchiri akụkụ abụọ nke ngwaahịa a.
Ejiri ya na ndụ kwa ụbọchị. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ n'ọfịs ọrụ, kichin, n'okporo ụzọ mmiri, nnukwu oriri, nzukọ wdg.
Mpempe nchebe ga-adị elu elu Iche mkpuchi ihu, bụ nke a na-ejikarị na ụlọ akụ, ndị ọrụ ụgbọ njem, ụlọ oriri na ọ publicụ publicụ, na ebe ọha; Nchebe ihu nwere ike igbochi onye ọrụ ahụ ịsasị mmiri na-emetọ mmiri na ndụ kwa ụbọchị na ọrụ. N'otu oge ahụ, ọta ihu nwere ezigbo mgbochi arụmọrụ ma na-enye ọhụụ doro anya.
1. Ọkpụkpụ Ihu zuru oke: transperent, dị fechaa, nke dị mma, iku ume, dị mma maka anya na-echebe, ọnụ, imi site na irighiri ufe, ụmụ irighiri mmiri, aerosols, sprays na splatters.
2. Akụrụngwa Akụrụngwa: PET dị elu na-arụ ọrụ PET. inogide na ihe bara uru.
3. Kedu Mkpa ọkụ & Nkasi Obi: Onye ọ bụla nwere eriri na-agbanwe agbanwe na okpu eji agba okirikiri, Ọ dị mma iyiri uwe ogologo oge. Ngwurugwu na uhere na-ete ahihia iji nye nkasi obi ozo n'enweghi nsogbu site na nsipu mmiri na irighiri ahihia.
4. Mbelata Splatter nke ọma: Ihu nchekwa ihu zuru oke na-echebe gị pụọ na ịgba na splatter. Site na iji usoro ergonomics, ọta nchekwa nchekwa na-arụ ọrụ maka ọtụtụ mmadụ.
Tupu ojiji, biko jiri nwayọ wepu ihe nkiri na-enye nchebe na akụkụ abụọ nke oghere ahụ.
Report Nyocha Akuko】
Nke gara aga: Coronavirus IgG & IgM Test Cassette
Osote: Uwe nchedo
Gbanwee ihu Gbanwee
Ngwurugwu Ihu Na-egbochi Dgbanye Echiche
Ngwurugwu Ihu Na-egbochi Ọkpụkụ Egwuregwu
Mmanụ Ala Na-egbochi Mmanụ Ala
Mkpuchi Mkpochapu Akpukpo Akpukpo
Mgbochi Ọkụ na-egbochi mmiri
Kpochapu Nkpuchi Anya
Nkpuchi Ihu Nchedo Nku
Etu mkpuchi ihu
Nkịtị Maka Ehu aja Ehu
Nkpuchi Nkpuchi Anya
Ihu Nchedo Ihu
Iche Ihu Ihu Gburugburu
Ihu Mkpuchi Etu
Ihu Nchedo Onyinye Na Ihu Niile
Ihu Nchedo Ihu Na Niile
Ihu Ihu Gburugburu
Ihu Onyinye Elu
Iso Iche Nzoputa Iche
Ulo Ndobe Uche Kriko
Usem Face Shield
Mgbapụta ihu Mmanụ Mmanụ
Ihu Mpempe Epe Mpepe
Ọkpụkpụ Nkịtị Pet
Ihu Nchedo Nkpuchi
Ihu Igwe Ọkụ
Ichebe Ihu Igwe Ọkụ
Ihe Nkpuchi Na-echedo Ala
Nchedo Ọkpụkpụ Ihu
Ihe Nkuchi Ọkpụkpụ Ihu
Ọta na-echebe ihu
Nkpuchi Nkpuchi Nkpuchi
Nchedo Isolation Na-echebe
Splash Defense Face Shield
Splash Defense Shield
Ọkụ na-egbochi mmiri
Nwa Ahịa N'ogbe
Uwe ọgwụ A na-atụfu, Mmiri Proof Hdpe Apron, Dust-Proof Pet Face Shield, Gowns chebe ya, Uwe Nchedo, Mmiri Proof,